လည်ပင်းအဆစ်များ အနေအထားမမှန်သူများ(အဆစ်ချော်သူများ)တွင် ပြုလုပ်သင့်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ - Hello Sayarwon
လည်ပင်းအဆစ်များ အနေအထားမမှန်သူများ(အဆစ်ချော်သူများ)တွင် ပြုလုပ်သင့်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ
Hello Sayarwon မှ ရေးသားသည်။2ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်းသည် ရှားပါးပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် လည်းပင်းနေရာရှိ အဆစ်များ အနေအထားချော်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံတွင် လည်ပင်းတွင် နာကျင်ခြင်း၊ ထုံခြင်းနှင့် အားနည်းခြင်းတို့ ခံစားရတတ်ပါသည်။ သို့သော် ထိရောက်သော ကုသမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် နာကျင်ဝေဒနာများကို သက်သာစေပါသည်။ ထိုသို့သော ကုထုံးများတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်းသည် အများအားဖြင့် လက္ခဏာပြလေ့မရှိပါ။ သို့သော် ထိုလက္ခဏာများပြလျှင်လည်း နာကျင်ခြင်းသည် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး လည်ပင်းနေရာမှစပြီးနာကျင်ပြီး ခေါင်း၊ ပခုံးများ၊ လက်မောင်းများနှင့် လက်ချောင်းများအထိ နာကျင်မှုများဖြစ်တတ်ပါသည်။ နာကျင်မှုသည် လည်ပင်းလှုပ်လိုက်သော အခါပိုဆိုးတတ်ပါသည်။ တခါတရံတွင် လည်ပင်းကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ လည်ပင်းကောင်းစွာ မလှုပ်နိုင်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာများ ပြလေ့ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူများတွင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျီးပေါင်းဖြစ်သော နေရာတွင် နာကျင်မှုများကို သက်သာစေရန်၊ ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေရန်၊ ကောင်းစွာလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် အကွေးအဆန့်ကောင်းစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အာရုံကြောများတွင် ဖိအားများလျော့နည်းသွားစေသောကြောင့်အာရုံကြောများကို ဖိမိခြင်းကြောင့် ခံစားနေရသော ဝေဒနာများကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။
လည်ပင်းဆစ်ချော်သူများတွင် ပြုလုပ်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ အဓိကသော့ချက်များ
လည်ပင်းဆစ်ချော်သူများတွင် ပြုလုပ်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများတွင် ဆွဲဆန့်ခြင်း၊ သန်မာစေခြင်းနှင့် ပေါ့ပါးသော လေ့ကျင့်ခန်းများဟူပြီး အပိုင်း ၃ပိုင်းပါဝင်ပါသည်။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို မည်သို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမည်၊ မလုပ်မှ မည်သည်တို့ကို ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်တို့ကို ပြောပြပါလိမ့်မည်။
1. အကြောများကို ဆန့်ပေးသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
အကြောများကို ဆန့်ပေးသော လေ့ကျင့်ခန်းများသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ကွေးဆန့်လှုပ်ရှားနိုင်မှုများကို တိုးတက်လာစေပြီး ပျော့ပျောင်းလာစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းလေ့ကျင့်ခန်းများသည် အဆစ်ချော်ခြင်းကြောင့် လည်ပင်းနာခြင်း၊ အကြောများတင်းခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါသည်။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကို နေ့တိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပြီး တနေ့တွင် အကြိမ်များစွာလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
2. ကြွက်သားများကို သန်မာစေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
ယင်းတို့သည် သင့်ကျောရိုးနှင့် ကိုယ်အနေအထားကို မှန်ကန်စေပါသည်။ ကိုယ်နေကိုယ်ဟန် ပုံမကျပါက ခါးကျောရိုးကိုထိခိုက်စေပြီး အဆစ်ချော်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ကြွက်သားများကို သန်မာစေသော လေ့ကျင့်ခန်းများကို နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ခါးကို ဒဏ်ဖြစ်မှုနှုန်းကို လျော့ကျစေပါသည်။
3. မပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ
ရေကူးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း စသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများသည် လည်ပင်းဆစ်နေရာများကို သွေးပိုစီးစေသည့်အတွက် ဒဏ်ဖြစ်နေသော နေရာများကို အနာအကျက်မြန်စေပါသည်။ ထို့ပြင် ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် ကိုယ်ထဲမှ အနာသက်သာစေသော Endorphin ဟော်မုန်းကို ထုတ်ပေးသောကြောင့် လည်ပင်းနာခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။
လည်ပင်းဆစ်ချော်သူများ အတွက် အကောင်းဆုံးသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း မပြုလုပ်မီ သင်နှင့် သင့်တော်ကြောင်း မသင့်တော်ကြောင်း ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
လည်ပင်းကြွက်သားများကို သန်မာစေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများသည် လည်ပင်းအရိုးများကို ထေက်ကန်ထားသော လည်ပင်းကို အနောက်ဖက်ဆွဲထားသော ကြွက်သားများကို သန်မာစေပါသည်။
· နံရံမှ ၈ စင်တီမီတာအကွာတွင် ခြေဖဝါးစုံရပ်ပါ။
· ကျောရိုးကို နံရံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်ထားပါ။
· သင့်ခေါင်းနှင့် နံရံထိသည့်အချိန်အထိ ခေါင်းနှင့် ကျောအပေါ်ပိုင်းကို အနောက်ဘက်သို့ လှန်ချပါ။
· ထိုအနေအထားတွင် သင့်မေးစေ့သည် အောက်သို့စိုက်နေပြီး သင့်ခေါင်းသည် အောက်သို့မကြည့်ဘဲ တည့်မတ်သော အနေအထားတွင် ရှိနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအနေအထားအတိုင်း ၅ စက္ကန့်ထားပါ။
· ထိုသို့ ၁၀ ကြိမ် ထပ်ပြီး ပြုလုပ်ပါ။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့တိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပြီး တနေ့တွင် အကြိမ်များစွာလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ သင့်ကျောကုန်း အပေါ်ပိုင်း၊ ပခုံးနှင့် လည်ပင်းကြွက်သားများကို သန်မာလာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပခုံးကြွက်သားများကို သန်မာစေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည့် သင့်ကျောကုန်း အပေါ်ပိုင်း၊ ပခုံးနှင့် လည်ပင်းကြွက်သားများကို သန်မာလာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
· ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဖျာ သို့မဟုတ် မျက်နှာသုတ်ပဝါကို ခင်းပြီး မှောက်လျက် အနေအထားအိပ်ပါ။
· သင့် လက်၂ဖက်ကို ကိုယ်ဘေးတွင် ချထားပါ။ လက်ဖဝါးများကို ကြမ်းပြင်နှင့် ထိထားပါ။
· သင့်လျှာကို ပါးစပ်အပြင်ထိရောက်အောင် ထုတ်ထားပါ။ ထိုအနေအထားသည် လည်ပင်းအရှေ့ပိုင်းရှိကြွက်သားများကို သန်မာလာစေပြီး လည်ပင်းကိုလည်း အနေအထားမှန်စေပါသည်။
· လက်ပြင်ရိုးများကို ဆွဲချဖို့ကြိုးစားပါ။
· လက်မောင်းများကို အပေါ်သို့မြှောက်ပါ။ လက်ဖဝါးများကိုလည်းကြွလိုက်ပြီး လက်မထောင်ထားပါ။
· ထို့နောက် ခင်းထားသော ဖျာသို့မဟုတ် မျက်နှာသုတ်ပဝါပေါ်မှ ခေါင်းကို ဖြေးညင်းစွာမော့လိုက်ပါ။ အရှေ့သို့တည့်တည့်ကြည့်ပါ။ ခေါင်းကို အနောက်ဘက်သို့ မယိုင်ပါစေနှင့်။
· ထိုအနေအထားအတိုင်း ၁၀စက္ကန့်နေပါ။
· ဆယ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျောရိုးဆစ်များတွင် ဖြစ်နေသော ဒဏ်ရာများကို အလျှင်းမပျောက်စေသော်လည်း ခံစားနေရသော ဝေဒနာများကိုသက်သာစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး သင်နှင့် သင့်တော်မည့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို မေးမြန်းပါ။ သင်သိထားရမည့် အချက်မှာ တက်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းသည် သင်သည် ရောဂါသည်တစ်ဦးဖြစ်နေဦးတော့ သင့်အတွက် ဆိုးကျိုးများမရှိနိုင်ပါ။
Spondylolysis and Spondylolisthesis. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00053. Accessed January 24, 2017.
http://www.nhs.uk/conditions/spondylolisthesis/Pages/Introduction.aspx. Accessed January 24, 2017.
Spondylolisthesis – Topic Overview. http://www.webmd.com/back-pain/tc/spondylolisthesis-topic-overview. Accessed January 24, 2017.
Neck Exercises for Neck Pain. http://www.spine-health.com/conditions/neck-pain/neck-exercises-neck-pain. Accessed January 24, 2017.